Ny doro tanety dia mbola tsy voafehy any Tiorkia, Gresy, Italia ary Espana
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny doro tanety dia mbola tsy voafehy any Tiorkia, Gresy, Italia ary Espana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Gresy • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Espaniola • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News
Mivavaha azafady mba hahazo an'i Gresy hafatra iray. Ireo toerana fialantsasatra any amin'ny nosy Kos, Rhodes any Gresy, Sisila ary atsimon'i Espana dia miady mba hamonjy izay mety ho voavonjy amin'ny doro tanety mirongatra manampy ny fiparitahan'ny COVID-19 sy horohoron-tany any amin'ny faritra hafa. Tena misy ny fiovan'ny toetrandro, mazava izao avy any Antalya ka hatrany Espana.
COVID sy horohoron-tany dia vao mainka mitombo ny vonjy taitra
Vao haingana eTurboNews nitatitra momba ny wmirongatra ny afo ao amin'ny faritra Antalya any Torkia.
Nandritra izay andro vitsivitsy izay dia nirongatra ny afo tsy tany Tiorkia ihany, fa ankehitriny koa any Gresy, Italia ary Espana. Izany dia ankoatry ny horohoron-tany any Torkia sy Gresy ary fitomboan'ny aretina COVID-19.
Tsy ny Kiorda, araka ny fiheveran'ny mpitondra sasany any Torkia, fa meloka ny fiovan'ny toetrandro. Fampitandremana matotra ateraky ny toetra voaararaotra io.
An-jatony no nafindra avy tao amin'ny toeram-pialan-tsasatra sy trano any amin'ny faritra izay manandrana mamerina ny fizahantany.
Andro fahenina izao miaraka amina olona an-jatony maro nafindra toerana any Gresy, Italia ary Espana izay an-jatony maro no nafindra avy tao amin'ny toeram-pialantsasatra sy trano.
Ny isan'ny maty vokatry ny hain'ireo Torkia dia nahatratra valo taorian'ny olona roa hafa maty ny alahady teo tao Manavgat. Ny afo tao an-tanàna dia efa namono olona dimy sy olona iray tao amin'ny Marmaris Resort.
Tratry ny haintrano ratsy indrindra ao anatin'ny folo taona farafahakeliny i Torkia, ary manodidina ny 95,000 hektara no may kilaometatra manarona an'i Mediterane.
Ny ankamaroan'ireo hain-trano 112 tany ho any izay nipoaka tany Torkia fotsiny tao anatin'izay dimy andro izay dia voafono avokoa, miaraka amin'ny mpamono afo mifantoka amin'ny ezak'izy ireo any Manavgat, Marmaris, ary Milas.
Ny manampahefana tiorka manadihady ny anton'ny afo dia nantsoin'ny ankizy hoe kiana Kiorda na fandoroana trano, saingy satria tsy miparitaka any Torkia fotsiny izao ny afo fa firenena maro any Eropa atsimo, dia toa misy ifandraisany amin'ny fiovan'ny toetrandro io olana io.
Tao Pescara, Italia, olona 800 no nafindra toerana avy tany amin'ny tranony sy ny toeram-pialan-tsasatra amoron-dranomasina taorian'ny haintrano niseho tao amin'ny tahiry voajanahary 53 hektara. Ny serivisy nasionaly nasionalin'ny firenena dia nilaza fa niantso vonjy maika 800 mahery. 250 ny lozam-pifamoivoizana dia 250, 130 tany Puglia sy Calabria, 90 tany Lazip, ary 70 tany Campania.
Tao Sisila, olona 200 no nafindra toerana hiala ny tanànan'ny seranan'i Catania.
Tany Gresy dia nisy haintrano niseho ny faran'ny herinandro lasa teo tao Patras, manamorona ny morontsiraka andrefana. Vohitra dimy no nafindra toerana ary olona valo no naiditra hopitaly noho ny olana nahazo ny taovam-pisefoana sy ny fahamaizana.
Ny mpamono afo dia niady nandritra ny alina mba hamonoana afo tao amin'ny nosy fialantsasatra Rhodes.
Rhodes, ilay nosy Dodecanianina lehibe indrindra any Gresy, dia fantatra amin'ny toeram-pialan-tsasatra amoron-dranomasina, rava taloha, ary ny sisa tavela tamin'ny asany ny Knights of St. John nandritra ny Crusades. Ny tanànan'i Rhodes dia misy tanàna tranainy misy ny làlana antenantenan'ny Knights sy ny lapan'ny Grand Masters. Nosamborin'ny Ottoman ary avy eo notazonin'ny Italiana, dia tranom-bakoka tantara izao ny lapa.
Ny fiaramanidina sy helikoptera dia nandatsaka rano tamin'ny afo tao Maritsa sy Psinthos any amin'ny faritra avaratra raha nandefa fanamafisana ny alatsinainy maraina.
Mpizahatany iray nisioka hoe: “Nijanona tokony ho adiny telo lasa teo ireo fiaramanidina hisintona rano avy amin'ny ranomasina. Ka inoako fa maty ny afo. Androany izy ireo dia nanidina nandritra ny 3 minitra ambonin'ny hotely misy anay. Misaotra ireo mpamono afo sy mpanampy rehetra. ”
Ny 5-10 min rehetra dia mameno rano eo alohan'ny Hotely anay. #rhodes #rhodos # afo #greecefire pic.twitter.com/TyhuaIE2jW
- Alessandro Rizzolini (@rizzolini) Aogositra 2, 2021
“Miaina any amin'ny afobe izahay,” hoy ny Ben'ny tanànan'i Bodrum: “Tsy azo atao ny mamono ny afo amin'ny tany, ary tara loatra ny hampiasana fiaramanidina mpamono afo na angidimby. Miezaka miaro ny faritra onenanay izahay. Saingy tsy afaka manao na inona na inona izahay hanavotana ireo hazo.
Afo mirehitra any Eropa sy Torkia
@selingirit ary @timursoykan nibitsika hoe: “Fanafihana amin'ny afo fampihorohoroana io amin'ny ala, ka afo maro no nanomboka niaraka tamin'izany fotoana izany, noho ny fiezahana lehibe dia hitazona azy ireo ho voafehy fa mety hitaky fotoana bebe kokoa any amin'ny faritra sasany, (raha mitsahatra tsy manome ny afo izy ireo hatrany hatrany hatrany) Tsy isalasalana fa ho sitrana ireo fahavoazana! ”
Any amin'ny faritra onenana ivelan'i Atena, may ny trano, ny toe-javatra any amin'ny nosy fialantsasatra any Kos & Rhodes dia mamoy fo tokoa; mpitoraka bitsika iray hafa kosa no nilaza ary nanampy hoe: “..ny afovoan-tany miakatra hafanan'ny 45 centigrade, covid ary horohoron-tany.”
Avy any Gresy, hoy ny lahatsoratra iray: "Mirongatra ny tontolon'ny Gresy .. Atena avaratra, Rhodes, tsy voafehy ny afo. Mivavaha ho an'i Gresy. ”
Hoy ny mpamaky iray any Athens: “Any amin'ny faritra avaratry Athens, ny afo dia vokatry ny fipoahan'ny tariby mihenjana. Misy ihany koa ny afo any atsimon'i Peloponnesus, any Rhodes, any Kos, ary amin'ny faritra hafa any Gresy noho ny hafanana be. Manao ahoana ny any Espana? ”
Ny doro tanety tany Espana dia nandoro 81,194 2019 hektara tamin'ny taona 10,717. Nitatitra hain-trano 3,544 ny manam-pahefana tao an-toerana, izay 14 no lehibe kokoa noho ny iray hektara. Anisan'izany ny doro tanety 500 lehibe izay nahatratra XNUMX hekitara mahery isanisany.